အိပ်မပျော်တော့ သီချင်းနားထောင်ရင်း စိတ်ကူးပေါက်ရာ လျှောက်ရေးပါသည်။
မီးခလုတ်ကို ပိတ်လိုက်မိပြီ ဖြစ်ပေမယ့် မအိပ်ချင်သေး။ တယောသံ ခပ်နွဲ့နွဲ့ပါသော သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို ဖွင့်လိုက်မိသည်။ ခပ်တိုးတိုးပေမယ့် သူလိုက်ညည်းနေမိသည်။ အိပ်ယာနံဘေးက နိုးစက်နာရီကို တွေ့တော့ ကြည်နူးနေသော စိတ်ကလေး ပျောက်သွားရသည်။ မနက်ဖြန် အလုပ်သွားရဦးမည်။ နိုးစက်ပေး ထားမှ။ ဒါပေမယ့် သူမအိပ်ချင်သေးပါ။
စိတ်ရှုပ်ရှုပ်နှင့် စောင်ကို မေးစေ့အထိ တင်းတင်းဆွဲကာ ခြုံလိုက်၏။ အိပ်ယာထဲမှာ လှဲလိုက်တော့ သာနေသော လကို ပြတင်းပေါက်မှ တဆင့် မြင်ရ၏။ လရောင်၏ ဖြားယောင်းမှု ဟူသော စကားကို သူနည်းနည်း သဘောပေါက် သလိုရှိမိ၏။ ဖြာနေသော အလင်းရောင်သည် ငြိမ်သက်စွာ သူ့အခန်းထဲသို့ ကျနေသည်။ ဆိတ်ငြိမ်သောညနှင့် လသည် အလွန်လိုက်ဖက် လှပါလား ဟုသူတွေးမိပြန်၏။ ခပ်တိုးတိုး သီချင်းသံကြောင့် ပိုပြီးခံစား၍ ရသယောင်။ စိတ်ကူး၍ နေချင်သေး၏။ ဘာအကြောင်းတွေး ရမည်မသိသော်လည်း စိတ်ကူးနှင့် အတွေးနှင့် အေးအေးလေး နေချင်သေးသည်။ ညကို အိပ်ပစ်ရမည်မှာ နှမြောစရာဟု သူထင်လာသည်။ သူမအိပ်ချင်သေးပါ။
ငွေလမှာ ဆုံကြသော ချစ်သူနှစ်ဦး၏ အကြည့်အကြောင်း သူကြားဖူးသည်ကို မှတ်မှတ်ရရပင်။ လရောင်ကြောင့် ၀င်းနေသော စကားဝါပင်ကို သူလွမ်းရင်း ငိုချင်လာသည်။ လရောင်အောက်မှာ ပွင့်နေသော ပန်းတွေနှင့် ထုံအီသော ရနံ့ တစ်ခုကို သတိရလာ၏။ အထပ်ထပ် ကြားနေရသော်လည်း နှစ်မျောနေချင်သေးသော၊ မဆုံးစေချင်သေးသော တေးသွားကို ကျော့၍ ဖွင့်နေပြန်၏။ တယောသံအောက်မှာ ဒီအတိုင်း နေချင်သေးသည်။ မဆုံးစေချင်သော အခြေအနေ တရပ်ကို အထပ်ထပ် ဖန်တီးလို့ ရသရွေ့တော့ ဖန်တီးပေဦးမည်။ သူမအိပ်ချင်သေးပါ။
တခါတရံ ရပ်တန့်ထားလို့ မရသော အချိန်ကာလများ အကြောင်း တွေးမိသည်။ ဆွဲထား၍ မရသော အချိန်များ၊ သိမ်းထားချင်သော တဒင်္ဂများ၊ သီချင်း တစ်ပုဒ်လို မဆုံးစေချင်သော တခဏများ၊ ပြန်ကာပြန်ကာ ထပ်နေစေချင်သော ပြကွက်များ။ ဖန်တီးချင်စိတ်ကို နေသားတကျ ဖြစ်စေလိုသောစိတ်နှင့် မဖျက်ဆီး ပါနှင့်တော့။ ရှိပါစေတော့လေ။ မျောနေသော အတွေး အတိုင်းသာ ထားလိုက်ပါဟု သူ့ကိုယ်ကို ပြောနေမိသည်။ သူမအိပ်ချင်သေးပါ။
တရွေ့ရွေ့ လာနေသော တိမ်တတိုက်က လကို ဖုံးသွားသည်ကို ကြည့်ရင်း ၀မ်းနည်း မိ၏။ သာပြီးလျှင် ကွယ်ရမြဲ။ ကွယ်ပြီးလျှင် သာရမြဲ။ ကွယ်ပြီးပြီမို့ တိမ်ကင်းစင်မည့် အချိန်ကို သူစောင့်နေမိသည်။ အတက်အကျနှေးရာမှ မြန်လာသော တေးသွားတစ်ပိုဒ်ကို သူကြားလိုက်သည်။ သို့ပေမယ့် လက ပြန်မသာလာသေး။ လပြန်ထွက်သည့် အချိန်ကို စောင့်ချင်သေး၏။ သူမအိပ်ချင်သေးပါ။
ဘာကြောင့်ရယ် မသိ ၀မ်းနည်းလာသော စိတ်ကို ငြင်းပယ်ရန် ကြိုးစားဖို့ သူသီချင်းတစ်ပုဒ် ပြောင်းဖွင့် လိုက်သည်။ သို့ပေမယ့် အချိုးမညီ မလိုက်ဖက်သော သီချင်းသည် တာရှည် မခံ။ ဆွေးမြေ့သော တယောသံကို သူပြန်ကြားချင်ပြန်၏။ လူဆိုတာ ခက်သားလား။ လွမ်းနေရတာကိုပဲ အရသာခံ၍ ကြိုက်တတ်လေ သလား။ ထိုသို့ ဆိုလျှင်လည်း ထိုအလွမ်းကို တစိမ့်စိမ့် ခံစားဖို့ အတွက် သူမအိပ်ချင်သေးပါ။
တိုးသွားလိုက် ကျယ်လာလိုက်နှင့် တယောသံကို သူကြားနေရဆဲ။ သူ့မျက်ခွံများ လေးလံလာသည် ကို ငြင်းပယ်နေမိ၏။ မရပ်ပစ်လိုက်ပါနဲ့။ ခံစားနှစ်သက်ဆဲ အချိန်လေး တစ်ခုကို မဆုံးရှုံး ချင်သေးပါ။ လုပ်သင့်တာနှင့် စိတ်၏စေရာ တို့ကြား သူလွန်ဆွဲနေဆဲ။ သူတယောကို မြင်နေရသည်။ အို…. သူ့လက်ထဲကို တယောတစ်လက် ရောက်နေပါရောလား။ အံ့သြဖွယ်ရာပဲ။ သူ့လက်များက တေးသွားကို တီးခတ်နေကြသည်။ သူ….မအိပ်ချင်သေးပါ။
အိပ်စက်ခြင်း၏ နောက်တဖက်မှာ လင်းလက်သော နေရောင် တစ်ခု။ သူတာဝန်ယူ ထားသော ဘ၀တစ်ခု။
သူ တကယ် မအိပ်ချင်သေးပါ။
Posted by ပုံရိပ် / Pon Yate at 11:436comments:
“ဟေ့ ပုံရိပ် ဆိုတာ ရှိလား။”
ကြောက်ကြောက်နဲ့ အမှောင် ထဲက ထွက်လာခဲ့သည်။ ကိုယ်ဘယ်ရောက် နေလဲဆိုတာလဲ သေချာ မသိ။ သိသလိုလိုတော့ ရှိသည်။ ဒါပေမယ့် မသိချင်တော့ မသိချင်ယောင်သာ ဆောင်လို့ နေမိသည်။ အခန်း တစ်ခုလုံးက ခပ်မှောင်မှောင်။ စားပွဲမှာ ထိုင်နေသူ အကြီးအကဲနှင့် သူ့တပည့်များ တ၀ိုက်တွင်သာ မီးထွန်း၍ ထားသည်။
“ဟေ့ ရှိရင် ထွက်ခဲ့လေ။”
လူတွေ ကြားထဲမှာ ယောင်လည်လည် လုပ်နေသောပုံရိပ်ကို မြင်ဟန် မတူသေး။
“အခု ဘလောက်ကို ပစ်ထားတယ် မဟုတ်လား။”
“အခု မင်းဘယ်ရောက် နေလဲ သိလား။”
“ဟုတ်..ဟုတ်ကဲ့။ အဲ… မဟုတ်။ မသိပါဘူး။”
“အခု ငရဲ ရောက်နေတာဟေ့။ ဘလောက် ငရဲ။”
ရှင် တစ်လုံးသာ တမိသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ငရဲ ရောက်တယ်ဆိုတာ မယုံချင်သေး။ ကိုယ်က လူကောင်းလေး ပဲဥစ္စာဟု ပွစိပွစိနဲ့ တွေးနေမိသေးသည်။ ကိုယ့်အတွေးကို ယမမင်း… အဲ ယမမင်းလို့ ခေါ်လေမည်လား။ ဘလောက်ငရဲက ယမမင်းဆိုတော့ အင်း… ယမမင်း (ခေတ္တ ဘလောက်ငရဲ) အဲဒီလိုလား မသိနိုင်။ အဲ ဘာတွေတွေး နေပါလိမ့်…။ ထားပါတော့ အဲဒီ ဘလောက် ငရဲမင်းက သိသွားပုံ ရသည်။
“ဟေ့ ဒီကို ရောက်လာတာ မင်းဟာမင်း ကောင်းကောင်း၊ ဆိုးဆိုး၊ တို့ဂရုမစိုက်ဘူး။ မင်းဘလောက်ဂါ လုပ်ချင်တယ် ဆိုပြီး တာဝန် မကျေဘူး။ ဘလောက်ကို ရက်ပေါင်း များစွာ ပစ်ထားတယ်။ ကော်မန့်တွေကို မပြန်ဘူး။ ဆီဗုံး အဲလေ…. ဆီဘောက်စ်မှာလဲ ဘလောက် ရောင်းရင်းတွေရဲ့ စကားကို မပြန်ဘူး။ ယုတ်စွဆုံး နှစ်ရက်တိတိ ဘလောက်တွေတောင် လိုက်မဖတ်ဘူး။ အဲဒါကြောင့် အသိတရားရအောင် ဒီကို ခေါ်လာတာပဲ။”
အင်း အမှန်တရားတွေတော့ ပြောနေပြီ။ ဘာမှ လုပ်လို့ မရတော့ဘူး ဆိုတာ ကိုယ့်ဟာကိုယ် သိလိုက်သည်။
“ကဲ ကြာတယ် ကြာတယ်…။ နောက်က လူတွေ စောင့်နေတာ ရှိသေးတယ်။ မင်းအပြစ်ဒဏ်ကို ပြောမယ်။”
အင်း အပြစ်ပေးမယ် ဆိုပြီး ဘယ်နှယ့် ကွန်ပျူတာတွေ ပြနေရပါလိမ့်။
“အေး အဲဒီ ကွန်ပျူတာသုံးပြီး တစ်နေ့ကို ဘလောက်ပို့စ် တစ်ခု ရေးရမယ်။ ပြီးရင် ဘလောက်ပေါ်မှာ တင်ရမယ်။ အင်း…. တင်ရမှာက အနှေးဆုံး ကော်နက်ရှင်နဲ့။ ဒီကြားထဲမှာ အနှောက်အယှက်တွေ ၀င်မယ်။ မီးက ပျက်မယ်။ ကော်နက်ရှင် ပြတ်မယ်။ အဲဒီ အခက်အခဲတွေကို ကျော်ပြီး တစ်နေ့ကို ပို့စ်တစ်ခု တင်ရမယ်။ ပြီးတော့ ဘလောက်ဆယ်ခုက ပို့စ်ဆယ်ခုကို ဖတ်ပြီး ငါ့ဆီကို နှစ်ရက်တစ်ခါ အကျဉ်းချုပ်တင်ရမယ်။ သူတို့ ဘာအကြောင်း ရေးထားလဲ။ ဘာကို ဆိုလိုချင်တာလဲ စသည်ဖြင့်ပေါ့။ အင်း…. အဲဒီကိစ္စတွေကို တစ်နေ့တည်း ပြီးအောင် မလုပ်နိုင်ရင်တော့…. ဟိုမှာ တွေ့လား ဒယ်အိုး။ ကဲဒါပဲ သွားတော့။”
ပြီးတော့ သူ့ဟာသူ ရေရွတ်သလို ကိုယ့်ကိုပဲ ဆုံးမချင်သလိုနဲ့ ဆက်ပြီး ပြောနေလေရဲ့။
“ဘယ်နှယ့်ဗျာ ဘလောက်ရေးဖို့ အခွင့်အရေး ကောင်းကောင်း ရှိနေရဲ့နဲ့၊ ကောင်းကောင်းမရေးဘူး။ တန်ဖိုးကို မထားတတ်ဘူး။ တန်ဖိုးနည်းနည်း သိအောင် ရေးကြည့်။”
သူပြောတဲ့ စကားကြားရင်း ငိုချင်လာသည်။ တန်ဖိုးကိုသိပါတယ်။ အလုပ်မအားလို့ပါ။ နိစ္စဓူဝ ဟိုကိစ္စ၊ ဒီကိစ္စ … ကိစ္စပေါင်းများစွာကို အကြောင်းပြမိရင်း ဘလောက်နဲ့ ဝေးကွာ သွားတာပါ။ ကွန်ပျူတာရှေ့မှာ ထိုင်ရင်း ချွေးပြန်လာသည်။ ကော်နက်ရှင် မပြောနဲ့။ စာရေးဖို့ ပြတင်းပေါက် (Window) ကို ဖွင့်တာ အခုထိ တက်မလာသေး။ ငါးမိနစ်လောက် ကြာသွားပြီ ထင်သည်။ ဘိုးတော် ဘုရားလက်ထက်က ကွန်ပျူတာတွေ ထင်တယ်။ ကျွန်မ မှားပါပြီဟု အော်ပြီး ငိုချင်လာသည်။ မှားပါပြီ… မှားပါပြီ….။ ပြတင်းပေါက်ရယ် ပွင့်ပါတော့….။ ပွင့်ပါတော့…။ ပွင့်ပါတော့…။
ပွင့်ပါတော့…။ ပွင့်ပါတော့….။ ဟင် ငါဘာတွေ အော်နေပါလိမ့်။ ကိုယ့်ရှေ့မှာ ကွန်ပျူတာလဲ မရှိ။ အိပ်မက်မက်နေတာဟု သိတော့မှပင် စိတ်အေးသွားသည်။ အင်း မနက်ကျရင်တော့ ပို့စ်တင် ဦးမှ။
Posted by ပုံရိပ် / Pon Yate at 00:09 16 comments:
ပထမဆုံးဆိုတာ မတွေ့ဖူးသေးတဲ့ အတွေ့အကြုံတစ်ခုကို စမိတဲ့ အချိန်ပါပဲ။ တွေးကြည့်မယ် ဆိုရင် ပထမဆုံးတွေက များသောအားဖြင့် ကလေးဘ၀မှာ များတာပေါ့။ ကျွန်မ ငယ်ငယ်ကတည်းက ပုံပြောဝါသနာ ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ပထမဆုံးတက်ရတဲ့ မူကြိုကျောင်းလေးမှာ ပထမဆုံး ခင်ခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းမလေးကို ပထမဆုံး အကြိမ်လိမ်တော့ တာပဲ။ ပုံပြင်လုပ်ပြီး၊ ဇာတ်လမ်းဆင်ပြီး သူ့ကို ပုံပြောပြတာလေ။ သူကတော့ ပါးစပ်လေး အဟောင်းသားနဲ့ အကောင်းမှတ်ပြီး နားထောင် တာပေါ့။
ဒီလိုနဲ့ အဲဒီကျောင်းလေးမှာပဲ ကျွန်မ ပုံပြောပြိုင်ပွဲမှာ ပထမဦးဆုံးဆု ရခဲ့ဖူးပါတယ်။ ရတာကလည်း ပထမဆုပါပဲ။ သြော် အဲဒီကျောင်းလေးမှာပဲ ပထမဆုံး သူငယ်ချင်း ကောင်လေးနဲ့ ခင်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့နာမည်တော့ မမှတ်မိတော့ပေမယ့် ကတုံးလေး ဆိုတာကိုတော့ မှတ်မိနေပါတယ်။ အဲဒီကျောင်းက ပထမဆုံး ဆရာမလေးကလည်း ချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲ။ နာမည်တော့ မမှတ်မိတော့ ပါဘူး။ ရုပ်ကိုတော့ မှတ်မိနေတယ်။ ဒီပထမဆုံးတွေက ကျွန်မရွေးချယ်ခဲ့တာ မဟုတ်ပေမယ့် သူတို့နဲ့ ပတ်သက်ရင် မှတ်မိနေတာဟာ ကြည်နူးစရာ မို့လို့ထင်ပါရဲ့။
အချို့ ပထမဆုံးတွေကိုတော့ ရွေးချယ်ခွင့် မရှိပေမယ့် အချို့ ပထမဆုံးတွေကတော့ ရွေးချယ်လို့ ရနေတယ် မဟုတ်လား။ ဒါကြောင့် ကျွန်မရဲ့ ပထမဆုံး ဖတ်ဖူးတဲ့ စာပေထဲမှာ ရွှေသွေးနဲ့ တေဇက ထိပ်ဆုံးကပဲ။ နောက်တော့ ရွှေဥဒေါင်းရေးတဲ့ ဦးစံရှားဝတ္ထုတွေကို သဲကြီးမဲကြီး ဖတ်တယ်။ စာအုပ်က လေးတော့ ကြမ်းပြင်ပေါ် ချပြီး ၀မ်းလျားမှောက် ဖတ်တာ မထတမ်းပဲ။
စာဖတ်ရာကနေ စာလေးတွေ ရေးဖြစ်တယ်။ အပိုင်းပိုင်း အစစနဲ့ မမှတ်မိတော့တာ များပါတယ်။ စိတ်ကူးထဲမှာ ရေးဖြစ်တာလည်း များတယ်။ အဖတ်တင်ကျန်ခဲ့ တာကတော့ ကျောင်းမှာ ရေးရတဲ့ စာစီစာကုံးလေးတွေပဲ။ ကျွန်မက ဟုတ်ဟုတ် မဟုတ်ဟုတ် စာစီစာကုံးကို အပတ်တကုတ် ရေးပါတယ်။ ခုတော့ ဘလောက်ဂ်လေး ရှိလာမှပဲ စာတွေ ခြေရာထင် ကျန်ပါတော့တယ်။ ကျွန်မရဲ့ ပထမဆုံး အဖတ်တင် ကျန်ခဲ့တဲ့ ၀တ္ထုကို ပြပါဆို မိုးရွာချိန် ဆိုတဲ့ ၀တ္ထုတိုလေးကို ပြရမှာပဲ။ ပထမဆုံး ကျန်ခဲ့တဲ့ ကဗျာလေးကလည်း ဘလောက်ဂ်ပေါ်က ပတ်ချာလည် ဆိုတဲ့ ကဗျာလေးပေါ့။ လာလည်တဲ့ သူတွေထဲမှာ မဂျစ် (ဂျစ်တူး) နဲ့ မပန် (ပန်ဒိုရာ) က ပထမဆုံး ထင်တယ်။ (မှားရင် ချိတ်မချိုး ပါနဲ့ကွယ်။)
အချို့ ပထမဆုံးတွေကို ကိုယ်ကိုတိုင် ကြိုက်ချင်လည်း ကြိုက်မယ်၊ ကြိုက်ချင်မှလည်း ကြိုက်မယ်။ အဲ…. ပထမဆုံး အကြိမ် အရိုက်ခံရတာကိုတော့ ဘယ်သူက ကြိုက်မှာလဲလေ။ ပထမဆုံး အရိုက်ခံရတာ ငယ်ငယ်က ကလေးချင်း ရန်ဖြစ်လို့ပေါ့။ ဘာကြောင့်မှန်း မမှတ်မိတော့ပေမယ့် အမေက ကောင်းကောင်းဆော်လိုက်တာ နောက်ရန်မဖြစ်ရဲတော့ ပါဘူး။ နောက်ပြီးတော့ ပထမဆုံး ၀င်ငွေရှာဖူးတဲ့ အလုပ်ကိုလည်း မကြိုက်ဘူး။ အမေတို့ အဖေတို့ကို ဆံပင်ဖြူနုတ်ပေးရတာလေ။ တစ်ချောင်းကို ငါးပြားလား မသိဘူး ရတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆံပင်ဖြူနုတ်ရတာ လက်ဝင်လွန်းလို့ မကြိုက်ဘူး။ အဲ…. အပိုကြေးလေးကိုတော့ ကြိုက်တယ်။ အမေတို့က ဆယ်ချောင်းဆိုလည်း တစ်ကျပ်ပြည့်အောင် ဖြည့်ပြီး ပေးလိုက်တာပဲ။ (အဲဒီလို အပိုကြေးမျိုး အလုပ်မှာ အမြဲရရင် ဘယ်လောက် ကောင်းမလဲ နော်။)
အချို့ ပထမဆုံးတွေ ကတော့ နောင်ထပ်ဖြစ်လာ စရာ အကြောင်း မရှိလို့ ပထမဆုံးလို့ပဲ ခေါ်ရမှာလား၊ ပထမဆုံးနဲ့ နောက်ဆုံးလို့ ပြောရမှာလား တွေးစရာပါ။ ကျွန်မမှာ အဲဒီလိုမျိုး ပထမဆုံး ရှားရှားပါးပါး တခုပဲ ရှိတယ်။ (ပြောတော့ ပါဘူး။)
ဒီလိုနဲ့ အသက်တွေကြီးလာတော့ ပထမဆုံးတွေ ရှိပြီးသား များလာသလို ပထမဆုံးတွေနဲ့ မကြုံရတော့ သလောက် ဖြစ်လာတယ်။ နိစ္စဓူဝ ဒါတွေက ဒါတွေချည်းပဲ။ ပထမဆုံးတွေကို မှတ်မိသလို နောက်ဆုံးတွေကိုရော သိနိုင်မလား ဆိုတာကိုလည်း မရေမရာ တွေးမိတယ်။
Posted by ပုံရိပ် / Pon Yate at 08:50 10 comments:
Posted by ပုံရိပ် / Pon Yate at 07:409comments:
Posted by ပုံရိပ် / Pon Yate at 12:28 8 comments:
Posted by ပုံရိပ် / Pon Yate at 11:192comments:
ခုတလော အလုပ်က များတာမို့ ညနေ အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့ အချိန်တွေမှာလည်း လူကတော်တော့်ကို မောနေပါပြီ။ ရေမိုးချိုး၊ စားစရာရှိတာ စားပြီးရင် စာအုပ်တစ်အုပ်နဲ့ ကွေးချင်စိတ်ကပဲ များနေပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ တဖန်ရောက်ခဲ့ ပြန်ပါပြီ သောကြာနေ့ညကို။ သောကြာနေ့ညနေတွေကို ပုံရိပ် အကြိုက်ဆုံးပါပဲ။ မြန်ဆန်လွန်းတဲ့ နေ့တွေ ခေတ္တရပ်ဆိုင်းပြီး နောက်တနေ့မှာလည်း အလုပ်သွားစရာ မလိုတာမို့ စိတ်လွတ်လက်လွတ် နေလို့ရပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ စားချင်တာစားပြီး ကွန်ပျူတာရှေ့ ထိုင်ပါတယ်။ ရေးလက်စလေး ဆက်ရေးမယ်ပေါ့။ ရေးလက်စက ရှိပေမယ့် ရေးနေကြ မဟုတ်တဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်း ဆိုတော့ ရေးရတာ သိပ်မသွားပါဘူး။ (ကြော်ငြာ ၀င်ထားတာ။) ပြောချင်တဲ့ အကြောင်းအရာကလည်း လိုရှင်း မရောက်ခင် တန်ဆာပလာလေးတွေ ထည့်နေရတော့ ခါတိုင်း ရေးတဲ့ ပို့စ်တွေထက် ပိုရှည်နေပါတယ်။ မနက်ကတော့ အလုပ်အသွားမှာ ဟိုစဉ်းစား ဒီစဉ်းစားနဲ့ ဟုတ်လို့ပဲ။ ရေးချင်စိတ်လေး ပြင်းထန်နေတယ်။ အခုတော့ ရေးရမှာ လက်တွန့်နေပြန်ရော။
ဒါနဲ့ ပျင်းပျင်းနဲ့ စဉ်းစားရင်း ခေါင်းကိုမော့လိုက်တော့ လား…လား…။ မျက်နှာကြက်ပေါ်မှာ ပိုးဟပ်တစ်ကောင်။ ပိုးဟပ်မှ အမိမြန်မာပြည်က ပိုးဟပ်နှင့် ဆွေမျိုးတော်ဟန်တူတဲ့ ပိုးဟပ်။ ဒီမှာက တချို့ပိုးဟပ်ကလေးတွေက သေးပါတယ်။ တော်တော်လေးသေးတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ ပိုးဟပ်ဆို ကြီးကြီးသေးသေး ပုံရိပ် အလွန်မုန်းပါတယ်။ အိမ်ကို တပ်နိုင်သလောက် သန့်သန့်ရှင်းရှင်း ထား၊ စားကြွင်းစားကျန်တွေ သပ်သပ်ရပ်ရပ် သိမ်းတာတောင်မှ ဒီပိုးဟပ်က ဘယ်ကရောက် လာတာလဲပေါ့။ (ဖြေရှင်းချက် ပေးကြည့်တာ။)
ခက်တာက သူက မီးဖိုထဲမှာ မဟုတ်ဘဲ အိပ်ခန်းထဲ ရောက်နေတာ။ ဒါနဲ့ မဖြစ်ဘူး ဆိုပြီး ခုံတစ်လုံးနဲ့ မျက်နှာကြက်ကို မီအောင် လုပ်ရပါတယ်။ ပြီးတော့ ကပ်ထူစက္ကူ အလိပ်တစ်လိပ်နဲ့ ပိုးဟပ်လိုက်ရိုက် ပါတော့တယ်။ ပိုးဟပ်ကလည်း သိပ်လျင်ပါတယ်။ ခုံအောက်ကနေ စားပွဲအောက်ရောက်။ ဗီရိုနားရောက်။ နောက်တော့ ရှာမတွေ့တော့ ပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ပေါ်များ ရောက်နေလားဆိုပြီး လိုက်ရှာကြည့် ရသေးတယ်။ တစ်ယောက်တည်း ရှုပ်နေတာပေါ့။ ဆယ်မိနစ် ဆယ့်ငါးမိနစ်လောက် ကြာရှာ ကြည့်ပါသေးတယ်။ နောက်တော့ ရှာမတွေ့တဲ့ အဆုံး လက်လျော့လိုက် ရပါတော့တယ်။
ခုံမှာ ပြန်ထိုင်တော့ ရေးလက်စ၊ စဉ်းစားလက်စ ဇာတ်လမ်းလေးလည်း ဘယ်ရောက်သွားတယ် မသိ။ မျက်စိကလည်း ဘယ်နားမှာများ ပိုးဟပ်ပုန်းနေ မလဲ ဆိုပြီး ဟိုကြည့်ဒီကြည့်။
နောက်ဆုံး မီးမှိတ် အိပ်ယာဝင်တဲ့ အထိ ပိုးဟပ်ကိုလည်း မတွေ့ပါဘူး။ စာမျက်နှာပေါ်မှာလည်း ဘာမှ မရေးဖြစ်လိုက် ပါဘူး။
(ပြီးကာနီး ပါပြီ။ ဒီပိတ်ရက်မှာ ပြီးအောင် ရေးမယ်။ ကြွေးကြော်ထားတာ။)
Posted by ပုံရိပ် / Pon Yate at 20:352comments:
Posted by ပုံရိပ် / Pon Yate at 10:097comments:
Posted by ပုံရိပ် / Pon Yate at 08:436comments:
Posted by ပုံရိပ် / Pon Yate at 08:43 No comments:
သူငယ်ငယ်က အစားအသောက်ကျွေး ရခက်လှသည်ဟု အမေက ငြီးငြူဖူးသည်။ ထမင်းစစားတတ် ကာစက ထမင်းကျွေးလျှင် လျှောက်၍ ပြေးသည်။ ပါးစပ်ထဲရောက် လာသော ထမင်းလုတ်ကို ထွေးပစ်တတ်သည်တဲ့။ သူမစားစားအောင် အမေက ကြံဖန်၍ ကျွေးရတတ်သည်တဲ့။ အသားအမျိုးမျိုးကို ကြော်၍တမျိုး၊ လှော်၍ တမျိုး မရိုးရအောင် လုပ်ကျွေးရှာသည်။ ထိုအချိန်က ဆန်ဈေးဆီဈေးမှာ အခုလောက် မတက်သေး။
သူဆယ်ကျော်သက် အရွယ်ရောက်တော့ အမေက တမျိုးပြောင်း၍ ငြီးသည်။ စားလွန်လွန်း၍ တဲ့။ ကိုယ်ခန္ဓာဖွံ့ဖြိုးဆဲမို့ စားနိုင်သောက်နိုင် လာတာကို အမေ မသိမဟုတ်။ နင်ဟာ မရှိအစားကြီးဟု တခါတလေတော့ အမေဆိုမိသည်။ တခါတလေတော့လည်း ငါ့သားဟာ ရှားပါးတဲ့ ကာလမှာမှ လာကြီးရလေခြင်းဟု အမေ ကရုဏာသက်သည်။ မည်သို့ဆိုစေ သူစားသလောက်ကိုတော့ အဖေရော အမေရောကပါ ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့သည်။
လူဆိုတာ အသက်ကြီးလာတာနှင့် အမျှ အစားတစ်လုတ် အပေါ် မက်မောစိတ် ကြီးထွားလာတတ်တာ ပေပဲ။ သူ့အသက်လည်း လေးဆယ်ကျော် ခဲ့ပြီ။ အစားတစ်လုတ် အတွက်တာဝန် များလည်း ပိုခဲ့ပြီ။ အသက်သည် အစားနှင့် တိုက်ရိုက် အချိုးကျသည် ဆိုလျှင် ငါ့ကျတော့ ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟု အသက်ခုနစ်ဆယ် အရွယ်အမေက ပြန်အငေါ်တူး တတ်သည်။ ဒါကတော့ အမေက အမေကိုး၊ အမေလို မဟုတ်တဲ့ သူတွေကို အများကြီးဟု သူကပြန်ပြောမိသည်။
တနေ့နဲ့တနေ့ အစားတစ်လုတ် အတွက် လူတွေဟာ ဘယ်လောက် အလုပ်ရှုပ်ကြ သလဲဟု အမေက ထောက်ပြလျှင် သူကတော့ ရယ်နေတတ်သည်။ မစားလို့ အသက်ဘယ်ရှင် မလဲ အမေရယ်… အဲဒီတော့ အသက်ရှင်ဖို့ အတွက် အလုပ်ရှုပ် နေကြတာ မဆန်းပါဘူးဟု သူက ဆင်ခြေပြန်ပေးမည်။ အဲဒီလို ပြောလျှင်တော့ အမေမှာလည်း ပြန်လည် ချေပရန် စကားရှိသည်ပဲ။ ဟဲ့… နင်တို့ဟာက အသက်ရှင်ဖို့စား နေကြတာ မဟုတ်တော့ဘူး။ အဲဒီအဆင့်ထက် အများကြီး ကျော်နေပြီ။ စားဖို့ အသက်ရှင်နေ ကြတဲ့ င၀ါးတွေပဲဟု ချက်ကျလက်ကျ ပြန်ပြောလျှင်တော့ သူရယ်ကျဲကျဲ လုပ်မိရုံသာ။
ကံကြမ္မာဆိုတာ သူကြိုမမြင် ရတော့လည်း ခက်သားပင်။ ထိုနေ့က ၀င်လာသော မုန်တိုင်းကို သူကြိုသိခွင့် မရခဲ့။ မိသားစုကို လက်ဆွဲကာ လွတ်ရာကို ပြေးသင့်ပြီဟု အသိဝင်သည့် အချိန်မှာ အိမ်မှာရှိသော ပုဆိုးစုတ်တစ်ထည်တောင် ယူခွင့်မရတော့။ အသက်နှင့် ခန္ဓာမြဲရန် ဇောသာ ရှိနေခဲ့သည်။
အားလုံးပြီးဆုံး သွားသည့် အချိန်မှာ သူ့လက်ထဲမှာ ဘာဆိုဘာမှ မရှိတော့။ သားပျောက်၊ မယားပျောက် သည့်လူတွေကို ကြည့်ရင်းနှင့်သာ မသေမပျောက် အားလုံးရှိနေသည် ကိုပင် ကျေးဇူးတင် နေရတော့သည်။
မုန်တိုင်းသတ်၍ မသေခဲ့သော အသက်သည် အချိန်တန်တော့လည်း အစားတစ်လုတ်ကို တောင်းတလာ ပေသည်။ သူနဲ့အတူ ပါလာသော ပါးစပ်ပေါက် ငါးပေါက်ကိုလည်း ကျွေးဖို့ကြံ ရပေဦးမည်။ သူ့လက်ထဲ၌ ဘာဆိုဘာမျှ ပါမလာခဲ့။ တကယ့်ကို လက်ချည်းသက်သက်သာ။ အမေသည် သစ်ပင်တစ်ပင်အောက်မှာ မှိန်းနေလျက်။ ကလေးတို့သည် နွမ်းနယ်စွာ ထိုင်နေလျက်။ မိန်းမသည်လည်း မျက်နှာမကောင်း။ တခါတရံတော့လည်း အသက်ရှင်ရခြင်းသည် ပို၍ ခက်ခဲလေသလားဟု သူတွေးမိသည်။
ဒီနေ့အလှူရှင်များက စားစရာဝေနေသည်ဟု အတူနေ ဒုက္ခသည် တစ်ယောက်က သတင်းပေး လာသည်။ ရေနဲ့မုန့်တွေ ဝေနေသတဲ့။ သူဝမ်းသာ အားရနှင့် အလှူပေးသော နေရာသို့ အပြေးလာခဲ့သည်။
သူ့ရှေ့မှာ မြင်နေရသော လူအုပ်ကြီးကို တိုးပေါက်နိုင်ပါ့ မလားဟု တွေးရင်း အတင်းသာ ရှေ့သို့တိုးခဲ့သည်။ ကမ်းနေသော၊ လှမ်းနေသောလက်တွေထက် ယူနေသော လက်တွေက များစွာ… များစွာ။ သူ့လက်တစ်ဖက် ပိုလာသောကြောင့် သူအခြားလက်တစ်ဖက်ကို ပုတ်ချလိုက် သလိုခံစား ရသည်။ အို… ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူ့မိသားစုအတွက် သူမှ မလုပ်ရင် ဘယ်သူကများ လာလုပ်ပေး မှာလဲ။
မလျှော့တမ်း တိုးဝှေ့နေကြသော လူအုပ်ကြီးထဲမှ တိုးထွက်လာတော့ သူ့လက်ထဲမှာ စားစရာတချို့နှင့် ရေဘူးသုံးဘူး ပါလာသည်။ သူ့မိသားစု ရှိနေသော သစ်ရိပ်အောက်ရောက်တော့ လူအုပ်ကြီးက တိုးနေဆဲ။ သူ့လက်ထဲမှ စားစရာကိုမြင်တော့ ကလေးတို့က ၀မ်းသာအားရ ပြေးလာကြသည်။ ကလေးတို့သည် မုန့်ကို အလုအယက် စားသောက်ရင်း ရွှင်လန်းလာကြသည်။ သြော်… သူ့ကလေးများသည် ရှားပါးသည့်ခေတ်တွင် မက၊ လုစားရသည့် ခေတ်တွင်မှ လူလာဖြစ်ရလေခြင်း။
သူသစ်ပင် အရိပ်အောက်မှာ ထိုင်ရင်း မိန်းမက ကမ်းပေးလာသော ခေါက်ဆွဲခြောက်ထုပ် တ၀က်ကို ၀ါးနေမိသည်။ အသက်ဆက်ဖို့ အစားတစ်လုတ် အတွက် တိုးဝှေ့နေကြသော လူအုပ်ကြီးကို ကြည့်ရင်း သူမနက်ဖြန်ကို ကြောက်လာသည်။ မနက်ဖြန် အတွက် အစားတစ်လုတ်ကို ဖန်တီး ရဦးမည်။ အစားတစ်လုတ်နှင့် အသက်ရှင် ရဦးမည်။ အစားတစ်လုတ် အတွက် အသက်ရှင် ရဦးမည်။ အစားတစ်လုတ် အပေါ်တွင် အသက်ရှင် ရဦးမည်။ အစားတစ်လုတ်ကြောင့်….. အသက်သေ ရဦးမည်။ အစားတစ်လုတ်ကို မက်၍ အသက်ပေါင်းများစွာ သေရဦးမည်။ အစားတစ်လုတ်ကို မက်သူတွေကြောင့် အသက်ပေါင်းများစွာ…. ဘ၀ပေါင်းများစွာ….။ အစားတစ်လုတ်….. အစားတစ်လုတ်…..
Posted by ပုံရိပ် / Pon Yate at 08:532comments:
မုန်တိုင်းကြောင့် ထိခိုက်ကြရသူများ အားလုံးသို့......
Posted by ပုံရိပ် / Pon Yate at 06:375comments:
Labels: ကဗျာ, အခြား